" आहा बाबु एस्तो चिकाइ पो चिकाइ " ............... - Nepali Sex Tube
मेरो छिमेकी दाजु अफिसको कामले तीन महिना बिदेश जानु परेकोले भाउजुले मलाई घर कुर्न बोलाइ रहन्थिन । मिठा मिठा कुरा गर्न खप्पिस थीन उनी । कारीब ४० बर्ष कि होलिन तर सारीरिक बनावट निकै नै लोभ लाग्दै थियो । मलाई त उन्को हिप बडो प्यारो लाग्थ्यो ……………..
लिङ पनी ठन्केर ठाडो हुन थाले छ । उन्को नजर मेरो लिङ तिर पर्दा त उन्ले स्वाट्टै वाइनको गिलास रित्याइन ……………….
उनी मलाई हेर्दै ” दाइको त काम काम र काम नै त छ नि खाली अफिसको काम छ भन्यो अनी घरलाई पनी अफिस नै बनायो ” भन्न थाल्छिन । ” चाहना त हुन्छ नि सबै को तर के गर्ने बुज्नेले बुझ्दैनन” एकोहोरो मलाई नै हेर्दै भन्छिन ……………….
कारीब पन्द्र मिनेट यसरी उन्को चाक चाट्दै पुती खेलाउदै गर्दा उन्ले आफ्नो माल झार्न थालछिन अनी मैले उन्को त्यो मिठो माल सबै चाटि चाटि खान थाले ।
“छ्या तपाईंलाई घिन लाग्दइन ?” सोधिन उन्ले । ” सेक्स मा नो घिन ” मैले भने ………….